12 | July | 2010 | Moep1's Blog
(NAY PYI TAW, 11 July,2010)
Prime Minister U Thein Sein, accompanied by Chairman of Mandalay Division Peace and Development Council Commander of Central Command Maj- Gen Tin Ngwe, ministers and heads of department visited Yeywa Hydropower Project in PyinOoLwin Township, Mandalay Division, yesterday morning.
The project is being undertaken by the Hydropower Department under the Ministry of Electric Power N0(1).
From the view deck, the Prime Minister inspected the inflow of water into the dam, diversion weir, outfall channel, spillway, power house and switchyard.
He viewed the process of installing electric turbines Nos (3) and (4).
The Prime Minister inspected the control room of the power house. Managing Director U Khin Maung Win of the department reported on facts about the generation process and system.
At the briefing hall, the Prime Minister observed the scale model of the project. Minister for Electric Power No.1 U Zaw Min reported on work progress, ongoing programmes, finishing touches, inflow of water into the dam, installation of parts of Nos (3) and (4) generators, and generation of hydropower by Nos (1) and (2) generators.
The Prime Minis-ter instructed officials to take preparedness against natural disasters, and preventive measures against possible dangers due to human activities. He called for bringing about experts of new generations, and worksite safety.
The Prime Minister gave fruit baskets to foreign and national experts.
Yeywa Hydropower Project was launched in 2001-2002 fiscal year. Now, it has been completed by 96.45 per cent.
Comments Off on PM inspects Yeywa Hydropower Project	| ရဲရွာ (့Yeywa)	| Permalink
(နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်)
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်သည် မန္တလေးတိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများလိုက်ပါလျက် ဇူလိုင် ၁၀ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် မန္တလေးမြို့မှ ထွက်ခွာလာပြီး နံနက် ၉နာရီ ၄၅မိနစ်တွင် မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရဲရွာရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ပင်မတမံရှုရပ်မှ ရေလှောင်ကန်အတွင်း ရေ၀င်ရောက်မှု အခြေအနေ၊ ရေလွှဲတမံ၊ စက်ရုံရေထုတ်မြောင်း၊ ရေပိုလွှဲ၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် Switchyardတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်သည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ (Power House)အတွင်း စက်အမှတ်(၃)နှင့် စက်အမှတ်(၄)တို့၏ ရေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်စက်အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ထိန်းချုပ်ခန်း (Control Room)အတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းက ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေနှင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစနစ်တို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ထို့နောက် စက်ရုံရှင်းလင်းဆောင်၌ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ပြီးစီးပြီးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ အချောသပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေ၊ ရေလှောင်ကန်အတွင်း ရေ၀င်ရောက်မှုအခြေအနေ၊ အမှတ်(၃)နှင့် အမှတ်(၄)ဂျင်နရေတာ၏ အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေ၊ ယခုအခါ စက်အမှတ်(၁)နှင့် စက်အမှတ်(၂)တို့မှ ဓာတ်အားများ ထုတ်လုပ်နေမှုအခြေအနေတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်က လုပ်ငန်းပမာဏကြီးမား၍ ငွေကြေးမြောက်မြားစွာ ကုန်ကျခံပြီး အချိန်ကာလကြာ တည်ဆောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်တို့မှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားရန်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအလိုက် အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မျိုးဆက်သစ်ပညာရှင်များအား မွေးထုတ်သွားရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဂရုပြုဆောင်ရွက်သွားရန် မှာကြားသည်။
Comments Off on နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| ရဲရွာ (့Yeywa)	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for the day Monday, July 12th, 2010.